Madagasikara: Miady hevitra ny momba ny Asabotsin-drà ny mpamaham-bolongana · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara: Miady hevitra ny momba ny Asabotsin-drà ny mpamaham-bolongana
Voadika ny 13 Febroary 2009 20:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, bahasa Indonesia, English
Nihamatroka ny toe-draharaha teto Madagasikara hatramin'ny 26 janoary 2009 nisiana fihetsiketsehana sy fandrobana nahafatesana hatramin'ny 50. Mbola nandriaka ny ra ny andron'ny Asabotsy 07 Febroary. Tononin'ny sasany ho “Asabotsy Mena” koa noho ny nitifiran'ny mpiambina ny filoha ny mpanao fihetsiketsehana nifamorivory teo ivelan'ny lapan'Ambohitsorohitra.
Nizotra ho eny an-dapa ny mpanao fihetsiketsehana hametraka an'i Monja Roindefo. Mbola vao minitra maromaro no niantsoan'i Andry Rajoelina, ilay nitono-tena ho “President (filoha)”, an'i Monja Roindefo ho “Praiminisitra” raha efa nanomboka hatramin'ny volana desambra ny fihetsiketsehina, raha nakaton'ny fitondran-dRavalomanana ny toby fampielezan-tsarin'i Andry Rajoelina. Nihanahery vaika ny fihetsiketsehana ka nanjary tonga hatramin'ny fandrobana, sy ny fitakiana ny fialan-dRavalomanana.
Anisan'ny niharan-doza nandritra ity Asabotsy mena ity moa i Ando Ratovonirina, mpaka lahatsary 26 taona miasa amin'ny RTA. Tsy vahiny amin'ny ekipa Malagasin'ny Global Voices izy, satria iray amin'ireo nitatitra ny momba ny fitaovan-tseraseran'olom-pirenena teto Antananarivo, izay nampirisihan'ny FOKO, iray amin'ny vatsian'ny Rising Voices.
Nafana dia nafana ny adihevitra teo am-pandrenesana ny vaovao, miady mafy hahalala ny anton-javatra nanosika ny Malagasy hitifitra ny mpiray tanindrazana aminy tahaka izao. Miady hevitra ny mpamaham-bolongana amin'izay tena tompon'andraikitr‘ ity famonoana ity: ireo izay nandrisika, nitarika avy eo, ny mpanao fihetsiketsehana hankany amin'ny lapam-panjakana, izay fantatra fa “faritra mena” sady manana fahalalahana feno ny miaramila hitifitra izay rehetra mandika ny “faritra mena”, hisian'ny “maritiora”n'ny fihetsiketsehana efa mihareraka; sa izay nanome ny baiko hitifitra.
“Pour provoquer la sortie de l’impasse créée par une auto-proclamation, les tenants de la prise de pouvoir insurrectionnelle emmènent la foule marcher sur un Palais présidentiel. Classés zones rouges, ces bâtiments sont protégés par un régime de protection spéciale qui expose les contrevenants au pire.
Quel que soit le Président en fonction, quel que soit le Palais concerné, quel que soit l’opposant qui mène la foule, quelle que soit la cause à défendre, quels que soient les militaires, les règles sont immuables : on ne peut impunément pénétrer dans un Palais d’Etat.”
“Mba hivoahana amin'ny kizon'ny fanandrata-tena, dia nitondra ny olona ho eny amin'ny lapam-panjakana ny vondron'ny mpanangana fitondrana mpioko. Manana satam-piarovana manokana amin'ny fisian'izay mety handika ireny trano voafaritra ho faritra mena ireny.
Na iza na iza filoha, na lapa inona na lapa inona, na iza na iza mitondra ny olona (hanafika), na inona na inona foto-kevitra arovana, na iza na iza ny miaramilan dia tsy miova ny fitsipika : Tsy azo idikidiram-poana tsy akory ny lapam-panjakana.”
Vavolombelona nanatrimaso tany an-toerana i Solofo, i Avylavitra ary i Barijaona.
Namoaka ny sarin'ny nialoha sy ny taorian'ny fitifirana i Solofo ary nanondro lehilahy iray nanao kravato volombatolalaka sy palitao sy pataloha mainty. Hita tao amin'ny lahatsarin'ny topmada.com koa moa io lehilahy io.
“Hitifitra hono izy… Tsy misy vahoaka mihemotra izany eo.”
“J'étais persuadé que tout avait été négocié à l'avance, que la foule resterait gentiment à distance, que seule une petite délégation entrerait à l'intérieur des grilles du palais et que c'est cette délégation qui demanderait ensuite à la foule de se disperser.
“Resy lahatra aho (tamin'io fotoana io) fa efa nifanarahana avokoa ny hatao, fa ho hendry hijanona eny lavitra eny ny vahoaka, fa solontena vitsy ihany no hiditra anatin'ny fefy vy ary dia hiangavy ny olona ireo solontena ireo avy eo hiparitaka. Lavitra loatra ny misy ahy hahalalako izay nitranga tao anaty vahoaka tao nialoha ny nivotsoran'ny rojom-piarovana. Raha nisy tompon'andraikitry ny mpanao fihetsiketsehana nanao hoe azo atao amin'izay ny miroso, dia lehibe ny helok’ (=andraikitr’) io tompon'andraikitra io. Tsy afa-miteny afa-tsy izay hitako sy reko aho, fa nahagaga ahy ihany raha tsy nampidirina ho anisan'ny delegasiona hifampiraharaha hiditra an-tokotanin'ny lapa i Andry Rajoelina sy Monja Roindefo.”
Nanontany i Avylavitra raha mbola mihatra ny lalàna amin'ny fotoana manivaka tahaka izao:
“Satria tokoa mantsy na aiza na aiza, dia ny vahoaka no tompon’ny fahefana fa mpindrana fotsiny ny mpitondra. Ka raha vahoaka haka izay nampindraminy no andraisana azy ireo, tsy ho azo natao ve ny nifampiresaka taminy? Raha ny fandraisako azy mants (tsy asiko firehana an!), dia rehefa tonga amin’ny fara-tampony toy izao ny fitakian’ny vahoaka, dia efa lasa ambonin’ny lalàna rehetra izany fitakiana izany, ka mihisaka maka zoron-trano daholo aloha na ny Lalampanorenana, na ny hafa. Diso ve aho? Raha eny, mba hazavao ny saiko.”
Nitantara ny fitsidihany teny amin'ny hopitaly HJRA izy ary namoaka ny sarin'ny maratra sy ny maty (Tandremo: sary mety hanohina na handratra fo).
Notateriny ihany koa ny hevitry ny olona tany amin'ny radio:
“Ireo onjam-peo izay henoina amin’izao ora izao dia mikiaka valifaty noho ny rà latsaka , ary mitaky ny fisamborana an-dRavalomanana daholo izay antso an-tarobia tafiditra. Miantso tody ihany koa ho amin’ny taranak’ingahy Ravalomanana, ary misy mihitsy aza ny midradradra ny amin’ny hisamborana sy hamonoana azy.”
Nanoratra ny nataon'ny olona teny an-dalambe avy hatrany, ankoatra izay nolazain'i Avylavitra, nandritra sy taorian'ny tifitra i Jentilisa. Notateriny ihany koa ny amin'ireo mpanararaotra nikendry ny hamaky, handrava ary handroba indray:
“Ny nahavariana, teny Soarano indrindra aho no nandre ny tifitra voalohany, fa nikoropaka avokoa na dia ny olona tany aza. Samy nandositra avokoa na ny mandeha an-tongotra na ny mpitondra fiarakodia ka nisy ny tsy nahatandri-tena intsony ka nodonin'ny fiara izay nanavotr'aina ihany koa. Mafy dia mafy ny nahazo ilay ramatoa voadona… Tsitapitapitr'izay fa nikatona avokoa ny toeram-pivarotana rehetra. Maro tamin'ny mpivarotra amoron-dalana no nanangona ny entany. Tsy niala tamin'ny toerany kosa anefa ny atsasaky ny mpivarotra teny Isotry (tsena ny andro Asabotsy) izay mihevitra fa tsy hanenjika olona hatreny kosa ny mpitandro ny filaminana. Nahare poa-basy koa ny teny Besarety, nahavariana ihany io raha ny halavitry ny toerana no heverina, hay saiky hisy hamaky avy hatrany indray ny shoprite teo Ambodivona izay tsy vaky nandritra ny andron'ny talata 27 janoary 2009. (…)
Nitantara mivantana avokoa manko ny ankamaroan'ny fampielezam-peo tamin'ity vanim-potoana “lehibe” ity… ka maro tamin'ireo tsy mankasitraka ny tolona no efa mitaintaina nahatonona mihitsy hoe “tifiro! tifiro amin'izay!” ary mba nahatonona koa izy ireo hoe “ela loatra koa izy izany!”. Malahelo aho milaza aminareo fa maro tamin'ireo izay tsy niomana ho eny, no nahasahy nilaza mihitsy hoe “nahazo izay notadiaviny izy izany!” ka toa tsy antra fo tamin'izay niharam-pahavoazana mihitsy aza. Ny mpankasitraka ny tolona sy izay nankeny Ambohitsorohitra kosa (ny teny Isotry no tena nohenoiko) dia mamerimberina hatrany fa “ny mpikarama an'ady” (ilay laingalainga nafafy hatry ny ela) no nitifitra fa tsy nisy Malagasy nitifitra izany. Maro tamin'izy ireo no nanozona ny filoha Ravalomanana sy nilaza azy ho mpamono olona. Inona koa? ny filoha Ravalomanana sy ny Praiminisitra no naneho voalohany ny fiaraha-miory sahady… fa i Andry Rajoelina kosa tamin'ny 18:30 vao nanao izany sady “nitomany” nanameloka an-dRavalomanana ho tompon'andraikitra amin'izao vono-olona izao. “
Nametraka ny seho roa mety hitranga nandritra ity fihaonan'ny Asabotsy ity i Jentilisa raha nanendry an'i Monja Roindefo, ho “praiminisitry” ny governemantany i Andry Rajoelina:
“Tranga roa no tsy maintsy hitranga nanomboka ny tolakandro ka efa tafakatra teny Antaninarenina amin'izay ireo olona (miala tsiny mivantambantana miteny hoe ny avy any ambany tanàna no tena maro an'isa tamin'ny fitarihana sy fialohavana teny ampilaharana tonga teny Antaninarenina): Na mitifitra ny mpitandro ny filaminana na may Ambohitsorohitra, ireo ihany, tsy misy hafa. Raha nanaiky ny hidiran'ny vahoaka ny lapan'Ambohitsorohitra ny miaramila tao anatiny dia mivandravandra fa tsy mifehy ny tafika intsony ny filoha Ravalomanana ka tsara ho azy ny miala ny toerany avy hatrany. Ny olona koa etsy andaniny efa mihorakoraka ny “ela loatra” ary tsy maintsy handroso (”jusqu'à la mort” hoy ny tarigetran'ny mpanohana ny TGV izay). Ny zavatra nahavariana dia tsy niakatra nankeny Antaninarenina mihitsy i Andry fa ny lalana mody ny azy no nasiany olona, noho izany dia ny Jly Dolin Rasolosoa no tena nandrindra ny fihetsiketsehana rehetra sy ny fifampiresahana tamin'ny mpitandro ny filaminana. Ny “Praiminisitra” vao notendrena Monja Roindefo Zafitsimivalo kosa moa dia karazana kofehy manara-panjaitra ihany.”
POV, mpanao saritatra, no nanontany izay nahatonga ny mpanao fihetsiketsehana hirohotra ho eny amin'ny miaramila mitam-piadiana:
“Puis les coups de feu ont éclaté. Les enquêtes démontreront peut-être ce qui s’est passé. Je doute que ceux qui étaient en première ligne allaient se ruer sur une rangée de soldats prêts à tirer. Je soupçonne que la pression de la foule en arrière les a poussés à faire un pas trop loin, vers la zone sécurisée.”
“Ary dia velona ny tifitra. Ny famotorana angamba no hahalalana izay nitranga teny. Misalasala aho raha nirohotra ho eny amin'ny miaramila vonon-kitifitra ireo lohalaharana. Miahiahy aho fa ny olona taoriana no nanosika azy ireo hijabaka, any amin'ny faritra voaaro.”
Nanameloka ny nataon'i Andry Rajoelina i POV :
“En lâchant sa foule sur le palais présidentiel, il a su (et espéré ?) qu’il y aurait certainement de la casse. Tel un général sur le champ de bataille, il se tient en retrait, observant les manœuvres de sa troupe, dirigée par ses lieutenants.
De tous les endroits où il pouvait envoyer sa horde, il a choisi le palais présidentiel. Symbolique, certes, mais c’est également une zone rouge – un site où les gardes sont autorisées, voire tenues d’ouvrir le feu sur ceux qui outrepassent les limites. Il a galvanisé la foule de rhétoriques du genre « entrez-y, le palais présidentiel appartient au peuple ! » Selon des témoignages, les gens ont d’abord flotté autour du site. Des pourparlers étaient en cours entre les lieutenants de Andry Rajoelina et les chefs de la garde présidentielle.”
“Efa fantany (sy nantenainy?) fa tsy maintsy hisy ny fahasimban-javatra rehefa namela ny mpanohana azy izy hananika ny lapam-panjakana. Nihataka, toy ireny Jeneraly eny an-tany fiadiana ireny, izy nijery ny ataon'ny olony izay tarihin'ny lefiny. Ny lapam-panjakana iasan'ny filoha no nosafidiany tamin'ireo toerana maro azony nandefasana ny olony. Famantarana ivelany izany, saingy faritra mena ihany koa – toerana ahazoan'ny mpiambina alalana hitifitra izay mihoa-pefy. Efa nandrisika ny olony tahatahaka izao izy hoe “Idiro, fa an'ny vahoaka io lapam-panjakana io !” Araka ny nolazain'ny nanatri-maso moa dia nihaodihaody nanodidina ny toerana ny olona. Nandeha ny fifampiresahana teo amin'ny lefitr'i Andry Rajoelina sy ny lehiben'ny mpiambina ny lapa.
News2Dago indray namoaka manontolo ny matoan-dahatsoratra nosoratan'i Valiavo Nasolo Andriamihaja, izay anontanian'ity farany raha mbola mitantana ny firenena ihany ny filoha Ravalomanana ary miantso ny hialany raha toa tsy voafehiny intsony firenena:
“Impiry impiry, hatramin’ny nanombohan’izao raharaha izao, no nitsangana sy niteny ny olona maro sady tsy momba ny atsy no tsy momba ny aroa : «mampidi-kizo izao fiziriziriana izao, tsy maintsy ny resaka no vaha-olana». Tsy misy nihaino isika.(…)
Ilay Filoham-pirenena, tsy hita, tsy nandrenesam-peo, mahabe ahiahy ny olon-tsotra manara-dalàna sady tsy tia korontana. Raha mba miteny indray, lavitra loatra, toa zary miafina, sanatria toa efa lositra. Fa Fanjakana inona loatra ity eto amintsika ity ? Tompon’andraikitra amin’ny haja sy voninahitra fotsiny fa mialangalana rehefa misy fahasahiranana ? Ianao ihany, Ravalomanana, no nihomehy ilay mpiandry omby miandry omby tokana : «tsy fantatra intsony, hoy ianao, iza no sefo, izy sa ilay omby». Mbola sefo ve ianao, Ravalomanana ?”
Fahatsapana iray nanako tao amin'ny bolongan'i Avylavitra:
“Maninona raha noraisina fotsiny ireo solo tenan’ny mpitokona dia nosamborina raha nilaina dia naparitaka fotsiny ny olona avy eo ? Raha tsy mandray andraikitra haingana ianao sy ny gouvernemantanao eny fa na amin kery aza raha ilaina hampandeha ny raharaha andava,andro dia tokony ary rariny raha mametra pialana ianao.”
Nandritra ny honohono naelin'ny VIVA sy ny Antsiva, samy mpanohana an'i Andry Rajoelina, nilazana fa tsy nanao fampilazana mialoha ny mpiambina ny lapa ary nisy koa ny tsaho fa nisy fitaovam-piadiana nentin'ny mpanao fihetsiketsehana dia naneho hevitra tao amin'ny bolongan'i Avylavitra i Jentilisa:
“Miarahaba anao rahalahy! Tamin’ny vaovao manokana navoakan’ny Tvplus voalohany indrindra tamin’ny Asabotsy dia nisy iny tovolahy naratran’ny bala tamin’ny tongony iny. Nisy nibata ilay zalahy io ka rehefa napetraka tamin’ny tany tao amin’ny toerana vonjimaika hitsaboana ilay zalahy dia nisy bala niraraka avy tamin’ilay olona sivily nibata io naratra io. Tsy niverina intsony ilay ampahantsary fa notapahina nandritra ny vaovao manokana hafa rehetra tamin’io andro io. Midika izany fa “nisy” nitondra fiadiana avy taty amin’ny vahoaka, izay nolazain’i Andry Rajoelina tamin’ny resaka nifanaovana tao amin’ny Viva TV androany, fa na nitondra fitaovam-piadiana aza ny vahoaka araka ny nambarany tsy tokony hamaly mihitsy ny mpitandro ny filaminana.”
Farany, samy naneho ny mari-pahatsiarovana sy fankasitrahana an'i Ando, ilay mpanao gazety maty am-perinasa nandritra ny fihetsiketsehana sy ny fanaovana fahirano ny lapam-panjakana iasan'ny filoha na i Lomelle sy Pakysse.
Misaotra an’i Mialy sy zokibe Jentilisa fa tena nahasoratra lava be mihitsy an! Miezaka ny maka sisiny kely aloha aho mandinika ny tena fandehan’ity zavatra iainan’ny Malagasy ity e. Ataoko sary ‘no comment’ angamba aloha manomboka eto, raha tsy hoe angaha….
15 Febroary 2009, 13:47
Izaho indray dia manameloka tanteraka ireo nitifitra, sy izay nibaiko nampitifitra. Fantatra ary niainantsika rehetra ny fandehanan’Atoa Jacques Sylla tany Mahazoarivo tamin’ny taona 2002. Zone rouge ny lapan’i Mahazoarivo, tsara ampahatsiahivina antsika izany. Samy Malagasy mahalala sy miaina ny toe-draharaha isika. Mahatsiaro ho fadiranovana aho izaky ny mivoaka ny trano, satria mampihorohor ahy ireo fiara-na miaramila manerana ny tanàna.
Kanefa, misy tsy azo ekena amin’ity fitondrana traihin’Atoa Ravalomanana ity. Misy ny vavolombelona manamarina fa nisy fitifirana avy teny amin’ny Trésor, tao Antaninarenina. Misy koa vavolombelona fa sandaina vola ireo olona tonga tany Mahamasina, efa natranga tamin’ny fahita lavitra hatrany an-dafy izany.
Mahamenatra ny fanararaotana ny fahantran’ny olona toy izany.
Misaotra anareo namaky ny hevitro.
Am-panajana sy am-pitiavana.
18 Febroary 2009, 15:15
Oay le aza
Ny tena manahirana amin’ity raharaha ity tsotra. Rehefa mitaky fiovana (an-terisetra=tsy mbola tapitra akory ny fe-potoana tokony hiasan’ny eo am-perinasa) ny vahoaka dia tsy maintsy misy ny ra latsaka. Tsy misy izany hoe mitolona izany ka mandeha am-pilaminana hatramin’ny farany. Lazaiko aminareo fa raha nilamina foana ny raharaha dia na ho tapitra aza ny fe-potona tokony hialan’ny Filoha Ravalomanana dia tsy ho vita ny tolona.
Porofo ny tamin’ny taona 1972, 1991, 2002. Tsy ho lazaina ny fitakiana fiovana tamin’ny 1947
Ny mampalahelo fotsiny dia betsaka no tsy mahatakatra izany. Paikady politika io mba hampitombo ny hafanampo eo amin’ny mpanao fihetsiketsehana mba hahatratraran’ny mpitarika ny tanjona tiany hodiavina.
Raha tsy nisy ny ra latsaka sy ny herisetra dia minoa ahy ianareo fa tsy nisy mihitsy ny fialan-dRavalomanana. Ary dia rera-maina teo foana ny mpitolona.
Ny azo ambara aloha dia tsy maintsy ho izay no lalana hizoran’ny tantaran’i Madagasikara. Diniho fa Ravalomanana hatrany no nanisy solika andrehetana ny afo: Fanendrena PDS, fanakaramana Gros Bras, fampiasana Emmo-Nat handatsaka baomba mandatsa-dranomaso, sns… Raha tsy nisy ireny, rava ho azy ny tolona.
Raha mpitari-tolona dia angamba mety mahatakatra izany avokoa. Izay no antony tsy nandehan’i Andry TGV teny Ambohitsorohitra satria fantany fa….saingy tsy maintsy….
Latsaka ny ranomasony…nefa mahasoa azy izany. Asa anefa raha mba hahasoa ny firenena tokoa… Isika Malagasy no tokony hieritreritra lalina.
19 Marsa 2009, 19:42